Ciidamadda Somaliland Oo Karin-dabayl Weyn Xoog Kaga Saaray Xubno Puntland ah | Gabiley News Online
Ciidamadda Somaliland Oo Karin-dabayl Weyn Xoog Kaga Saaray Xubno Puntland ah
Ciidamadda qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta dhar baaxo kulul ku dhuftay xubno masuuliyiin ah oo ka socday maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland oo ku soo xad-gudbay dhulka Somaliland.
Kuwaasoo socdaal qarsoodi ah maanta ku soo galay deegaanka Karin-dabayl weyn oo ka tirsan gobolka Sool.
Badhasaabka Sool oo ka warbixinayay sidii hawl-galkaasi u dhacay waxa uu yidhi, “Waxaan maanta ka saarnay deegaanka Karin-dabayl weyn ee gobolka Sool, xubno ka tirsan maamulka Puntland ee dalka Soomaaliya.
“Kama ogolin cid ku soo xad-gudubta xuduudka jamhuuriyada somaliland. Gor-gortan mar na kama gelayno, in lagu soo xad-gudbo xuduudaha dastuuriga ah ee Somaliland, ee ka tirsan ciidda gobolkan aan hoggaanka ka ahay ee Sool, isla markaana ajande siyaasadeed oo kan Somaliland ka baxsan, lalama iman karo, kama na dhex shaqayn karo” ayuu yidhi C/qani Jiidhe.
Waxaanu yidhi, “Waxaan uga digayaa maamulka Puntland inay ka waan toobaan qorsheyaasha Hagaaska ah ee dadkan iyo deegaamadan xilli hore ka tashaday, dantooda na gartay ay uga soo dul dhacayaan. Iyagoo wax dan ah aan u ahaynin.
Waxaanu yidhi, “Waxaan u mahad cellinayaa, Ciidammada Qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo si deg-dega arrintan uga hawl-galay, xilli walba-na u taagan ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyada Somaliland”.